[Latin Name] Huperzia serratum [Source] Huperziceae dhalatada oo dhan ka Shiinaha [Imaansho] Brown in cad [koobnaan cunto] Huperzine A [faahfaahinta] Huperzine A 1% - 5%, HPLC [milmi] L. in chloroform, methanol, ethanol, wax yar L. biyo [size walxaha] 80 mesh [Loss on qalajiyo] ≤5.0% [culus birta] ≤10PPM [Sunta hadhay] EC396-2005, USP 34, EP 8.0, FDA [Kaydinta] Store ee aagga qabow & engegan, ka fog sii nuurka toos ah iyo kulaylkii. [Mudada nolosha] 24 Months [Xidhmada] buuxiyey oo ku yaal ...
[Source] Huperziceae dhalatada oo dhan ka Shiinaha
[Imaansho] Brown in cad
[Koobnaan cunto] Huperzine A
[Faahfaahinta]Huperzine A 1% – 5%, HPLC
[Milmi] L. in chloroform, methanol, ethanol, wax yar L. biyo
[Sunta hadhay] EC396-2005, USP 34, EP 8.0, FDA
[Waa maxay Huperzine A]
Huperzia waa nooc ka mid ah ajada in koraa Shiinaha. Waa la xiriira in Muuse kooxda (qoyska Lycopodiaceae) iyo waxaa lagu yaqaan in ay botanists qaar ka mid ah sida serratum Lycopodium. ajada oo dhan diyaar u ahaa dhaqan ahaan loo isticmaalo. leysagu Modern isticmaal oo keliya dhimirka ee go'doon yaqaan huperzine A. Huperzine A waa dhimirka ah oo laga helay huperzia ayaa la soo sheegay si looga hortago burbur ku acetylcholine, walax muhiim ah loo baahan yahay by habka dareemayaasha jirka macluumaadka gudbiyaan ka cell inay gacanta. cilmi Animal ayaa soo jeediyay in awooda huperzine A ee loo ilaalin acetylcholine waxaa laga yaabaa in ka weyn yahay kii daawada qaar ka mid ah. Loss of function acetylcholine waa feature a hoose ee dhowr xanuunada shaqada maskaxda, oo ay ku jiraan cudurka Alzheimers. Huperzine A ayaa sidoo kale laga yaabaa in ay saameyn ku ilaaliya on unugyada maskaxda, sii kordhaya ee ay ka iman kara afka baarkiisa loogu caawiyo in la yareeyo astaamaha cudurada maskaxda qaarkood.
[Function] Waxaa loo adeegsaday in daawo kale, huperzine A ayaa la ogaaday inay u dhaqmaan sida inhibitor cholinesterase ah, nooc ka mid ah daawada loo isticmaalo si looga hortago burbur ku acetylcholine (a kiimikada lagama maarmaan ah in waxbarashada iyo xusuusta).
Ma aha oo kaliya loo isticmaalo sida daawada loogu talagalay cudurka Alzheimers, huperzine A ayaa sidoo kale sheegay in si kor loogu qaado waxbarashada iyo xusuusta iyo si looga hortago hoos garashada da'da la xiriira.
Intaa waxaa dheer, huperzine A waxaa mararka qaarkood loo isticmaalaa si kor loogu qaado tamarta, la kordhiyo feejignaanta, iyo gargaartaan ee daaweynta ee laga daweeyay gravis (disorder ah, shalalka oo saameeya murqaha).
Previous: soosaaray shaaha Green
Next: Kava Warbixiinta
Liinta Aurantium Warbixiinta